ပေါက်ကရ ဘလော့ဂ်တွင် Post များ ပြန်တင်နေပါသည်။ အားလုံး ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဘာဖြစ်လို့ ပေါက်ကရလို့ နာမည်ပေးတာလဲဆိုတော့ စလုပ်တဲ့အချိန်မှာ လုပ်လို့မတတ်လို့ ပေါက်ကရလျှောက်လုပ်ရင်းနဲ့ ဖြစ်လာလို့ ပေါက်ကရလို့ ဘလော့ဂ်နာမည်ပေးလိုက်တာပါ။ ဒီဘလော့ဂ်မှာ တင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေက တခြားနေရာက ကော်ပီကူးပြီးတော့ မျှဝေပေးခြင်းသာ ဖြစ်ပါသည်။
3:14 PM သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် No comments
အိမ်ယာဝန်းမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးရဲ့ အဆိုအရတော့ “ကျွန်တော်တို့က စည်ပင်သာယာမှ တာဝန်ရှိသူများနှင့် စကားပြောပြီးပါပြီ။ ဒါပေမယ့် သူတို့က အမှိုက်ကား မလောက်ငှသည်က တစ်ကြောင်း၊ အိမ်ယာဝန်းထဲ လာဖို့ အခက်အခဲရှိသည်က တစ်ကြောင်း အစရှိသည့် အကျိုးအကြောင်းတို့ကြောင့် ဒီအိမ်ယာဝန်း စတင် တည်ဆောက်ခဲ့တဲ့ လွန်ခဲ့သော ဆယ်စုနှစ်ကတည်းက အမှိုက်သိမ်းစနစ်ဆိုတာ ဒီမှာ မရှိခဲ့တာပါ။ အမှိုက်တွေကို ချောင်းနားမှာ လာလာစွန့်ပစ်ကြလို့ အနံ့အသက် မကောင်းသည့် အတွက်ကြောင့် “အမှိုက်များကို ချောင်းထဲသို့ ရောက်အောင် သွန်ပါ” ဆိုတဲ့ ဆိုင်းဘုတ်ကို ချိတ်ဆွဲပေးထားတာပါ။ နည်းလမ်း မရှိတော့ဘူးလေ"ဟု ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အိမ်ယာဝင်းထဲသို့ လာရောက်လည်ပတ်ကြတဲ့ နိုင်ငံခြားသားများမှလည်း ထိုမြင်ကွင်းကို တွေ့တိုင်း နှာခေါင်းရှုံ့ချသည့်အတွက်ကြောင့် ဤကဏ္ဍမှာ ရေးသားတင်ပြလိုက်ပါတယ်။
Myanmar ICT Facebook
10:09 AM သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် No comments
RFA မှ ကူးယူဖေါ်ပြ။
3:34 PM ဆောင်းပါး No comments
ထင်ရှားသော ခေါင်းဆောင်မှု သီအိုရ တစ်ရပ်အရ အဖြစ်အပျက် အပြောင်းအလဲ ကြီးကြီးမားမားများနှင့် အတူ ခေါင်းဆောင်များ ပေါ်ထွက်လာတတ်သည့်အတိုင်း မြန်မာ့သမိုင်းတွင် အပြောင်းအလဲ ထူးထူးခြားခြား ဖြစ်ပေါ်နေချိန် ယနေ့အခါ သမယတွင် ခေါင်းဆောင်သုံးဦး ထင်ထင်ရှားရှား ပေါ်ထွက်လာသည်။ ထိုခေါင်းဆောင်သုံးဦး၏ ဥာဏ်အမြော်အမြင်၊ လုပ်ဆောင်ချက် များနှင့် သူတို့အကြား ဆက်ဆံရေး၊ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုတို့သည် နိုင်ငံ၏ ပစ္စုပ္ပန်ကိုသာမက မဝေးလှသည့် အနာဂတ်၊ ခပ်ဝေးဝေး အနာဂတ်ကိုပါ ဖော်ဆောင် ပဲ့ကိုင်သွားလိမ့်မည်။
ယခင် အစိုးရလက်ထက်က ၀န်ကြီးချုပ် ဖြစ်ခဲ့သော ဦးသိန်းစိန် သမ္မတအဖြစ် တက်လာစအချိန်တွင် စောင့်ကြည့်ရဦးမည် ဟူသော ထင်မြင်မှုများ ရှိခဲ့သော်လည်း လပိုင်းအကြာ၌ ရင်သပ် ရှုမောရသော ပြုပြင် ပြောင်းလဲရေးများ ဆက်တိုက် ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး နိုင်ငံတွင်း သာမက တစ်ကမ္ဘာလုံးက အသိအမှတ် ပြုရသော ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး ခေါင်းဆောင် အဖြစ် ပေါ်ထွက် လာခဲ့သည်။
ယိုင်တိုင်တိုင် စီးပွားရေးကို ထောင်မတ်ရန်၊ နိုင်ငံရေးစနစ်ကို ဗဟိုဦးစီးစနစ်မှ ဒီမိုကရေစီ စနစ်သို့ ကူးပြောင်းရန်၊ ပြည်တွင်း ငြိမ်းချမ်းရေးမှသည် တစ်နိုင်ငံလုံး စည်းလုံး ညီညွတ်ရန်၊ နိုင်ငံတကာတွင် မြန်မာ့ဂုဏ်သိက္ခာ တက်အောင် ဆောင်ရွက်ရန် တို့သည် မြန်မာနိုင်ငံကို ဦးသိန်းစိန် တစ်ပြိုင်တည်း ဦးဆောင် ချီတက်ရသည့် အဓိက ပန်းတိုင်များ ဖြစ်ပြီး တစ်ခုချင်းစီပင် ဖြစ်မြောက်အောင် လုပ်ဆောင်ရန် မလွယ်လှသည့် ရည်မှန်းချက်များဖြစ်သည်။
စွမ်းရည်မြင့် လူသား အရင်းအမြစ်များ ရှားပါးမှု၊ ရိုးသားခြင်း ကြိုးစားခြင်းတို့ကို တန်ဖိုး ထားသော်လည်း လက်တွေ့ ကျင့်သုံးမှု အားနည်းသော လူ့အဖွဲ့အစည်း၊ အားနည်းသော ၀န်ထမ်း အဖွဲ့အစည်း၊ ပြောင်းလိုသူနှင့် မပြောင်းလိုသူ၊ ပြောင်းနေမှန်း မသိသူတို့အကြား လွန်ဆွဲပွဲ စသော စိန်ခေါ်မှုကြီးများ ရှိနေသည့်ကြားမှ အထက်ပါ ပန်းတိုင်များသို့ ချီတက်ရသည်မှာ ဧရာမ တာဝန်ပင် ဖြစ်သော် လည်း နိုင်ငံအရွေ့ တစ်ခုသို့ အချိန်တိုအတွင်း ရောက်ခဲ့သည်မှာ သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန်၏ ခေါင်းဆောင်မှုနှင့် ဇွဲနပဲ တို့ကြောင့် ဖြစ်သည်။
ရိုးသားခြင်း၊ အခြားသူတို့ အမြင်ကို နားစိုက် ထောင်ခြင်း၊ ပြုပြင် ပြောင်းလဲရေး သန္နိဋ္ဌာန် မြင့်မားခြင်းတို့မှာ အများ အသိအမှတ် ပြုရသော ဦးသိန်းစိန်၏ ထူးခြားသည့် စရိုက် လက္ခဏာများ ဖြစ်ပြီး ပြည်တွင်းတွင်လည်း ယုံကြည် ကိုးစားခံရမှု အထူးပင် မြင့်တက် နေခဲ့သည်။
ယခင် အစိုးရ လက်ထက်က နံပါတ်သုံး နေရာတွင် ရှိခဲ့သော သူရဦးရွှေမန်း ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ ဖြစ်လာသောကြောင့် ဘေးသို့ ရောက်သွားသည်ဟု ထင်မြင်သူ အချို့ ရှိခဲ့သော်လည်း ယင်းမှာ စနစ်သစ်တွင် လွှတ်တော်၏ ကြီးမားသော အခန်းကဏ္ဍကို အမှတ်တမဲ့ ဖြစ်နေသောကြောင့် ဖြစ်သည်။
အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုတွင်လည်း ကျင့်သုံးသည့် သမ္မတစနစ်တွင် အုပ်ချုပ်ရေး မဏ္ဍိုင်နှင့် ဥပဒေပြုရေး မဏ္ဍိုင်တို့ အပြန်အလှန် ထိန်းညှိ ခြင်းဖြင့် ဒီမိုကရေစီကို ထိန်းသိမ်းထားသလို နိုင်ငံကိုလည်း ချောမွေ့စွာ လည်ပတ်စေသည်။ အထူးသဖြင့် ဗဟို ဦးစီးစနစ်မှ ကူးပြောင်းစ နိုင်ငံတို့တွင် အုပ်ချုပ်ရေး မဏ္ဍိုင်မှာ အားကောင်းမြဲ ဖြစ်သည့်အတွက် လွှတ်တော်ပါ လိုက်ပါ အားကောင်းလာမှ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေက ရည်ရွယ်သည့် အပြန်အလှန်ထိန်းညှိခြင်း (Checks and Balance) အထ မြောက်မည်။ ထိုသို့ အထမြောက်မှသာ သမ္မတစနစ် အသက်ဝင်ကာ ဒီမိုကရေစီ ခိုင်မာ အားကောင်းလာမည်။
သမ္မတ စနစ်၏ လွှတ်တော်ကဲ့သို့ လွှတ်တော်မျိုး မြန်မာနိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေး ရပြီးချိန်မှစကာ မပေါ်ဖူး သေးခြင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဥပဒေ အများအပြားမှာ အိုမင်း ဟောင်းနွမ်း ခေတ်မမီခြင်းကြောင့် ပြင်ဆင် အသစ်ရေးဆွဲရန် လိုခြင်းတို့ကြောင့် လွှတ်တော် အသက်ဝင်ရန် လိုအပ်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ပြည်သူ့ လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးရွှေမန်းက လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များ အနေဖြင့် ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ဆောင်ရွက်ကြရန် အစဉ်တစိုက် ဆော်သြခဲ့ သလို အခြေအနေ ကောင်းများ ဖန်တီးပေးခဲ့သောကြောင့် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များ တစတစ ပြောရဲဆိုရဲ ရှိလာကာ လွှတ်တော် စတင် အသက်ဝင်လာခဲ့သည်။ ယခုနောက်ပိုင်းလွှတ်တော်အရှိန် ရလာချိန် အရေးပါသော အချိုးအကွေ့များတွင်လည်း ဦးရွှေမန်း၏ ခေါင်းဆောင်မှုမှာ အရာရောက်ခဲ့သောကြောင့် သူသည်လည်း ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး ထိပ်တန်း ခေါင်းဆောင် (Reformist Figure) အဖြစ် အသိအမှတ် ပြုခံလာရသည်။
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ၊ ငြိမ်းချမ်းရေး နိုဘယ်လ် ဆုရှင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် တောင်အာဖရိက သမ္မတဟောင်း နယ်လ်ဆင်မင်ဒဲလား နောက်ပိုင်းတွင် အကျော်ကြားဆုံးသော နိုင်ငံတကာ ခေါင်းဆောင်နေရာကို ရရှိထားခဲ့သည့် ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သည်။ မြန်မာ့အရေးနှင့် ပတ်သက်သည့် သူ၏အမြင်၊ အတွေးတို့သည် နိုင်ငံတကာ အသိုက်အ၀န်း၊ အထူးသဖြင့် စက်မှုအင်အားကြီး နိုင်ငံတို့ကို သြဇာ လွှမ်းမိုးသည်။ ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲတွင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်က တစ်နေရာမှ လွဲလျှင် နေရာအားလုံးရရှိကာ အောင်ပွဲခံနိုင်ခဲ့ခြင်းမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏အား အဓိက (Aung San Suu Kyi Factor) ဟု မြန်မာ့နိုင်ငံရေး သုတေသီများက အကဲဖြတ် ခဲ့သည်အထိ ပြည်တွင်းတွင်လည်း ထောက်ခံမှု အားကောင်းခဲ့သည်။
မူလက အလုပ်သဘော နိုင်ငံရေး ဖြစ်စဉ် (Formal Political Process) တွင် မပါဝင်ဘဲ ရှိနေခဲ့သည့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သည် ရွေးကောက်ပွဲ အနိုင်ရကာ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဖြစ်လာ ချိန်တွင် ထိုဖြစ်စဉ် ထဲသို့ ၀င်ရောက်လာခဲ့ပြီး ယင်းဖြစ်ရပ်တစ်ခု တည်းကပင် မြန်မာ့နိုင်ငံရေး မျက်နှာစာ၏ အလှည့်အပြောင်း တစ်ရပ် ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ရွေးကောက်ပွဲ ရလဒ်အရ လွှတ်တော် အတွင်းတွင် ဒုတိယနေရာ အများဆုံးရ ပါတီ၏ ခေါင်းဆောင် ဖြစ်လာခဲ့သလို လွှတ်တော်ကော်မတီ တစ်ရပ်၏ ဥက္ကဋ္ဌလည်းဖြစ်လာ ခဲ့သည်။ လွှတ်တော်တွင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၀င်ချိန်မှ စကာ လွှတ်တော်ကို ပြည်သူလူထု စိတ်ဝင်စားခြင်း ပိုမို မြင့်တက်လာပြီး မြန်မာ့လွှတ်တော်သည် ကမ္ဘာ့လွှတ်တော်များ အနက် နိုင်ငံတကာ စိတ်ဝင်စားခြင်း အခံရဆုံး လွှတ်တော် တစ်ရပ်ဖြစ်လာသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် Democratic Institutions (ဒီမိုကရေစီ အစဉ်အလာ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊ အဖွဲ့အစည်းများ) ဖြစ်တည်စ ရှိနေသေး သောကြောင့် ပုဂ္ဂိုလ် (Individual) ကို အခြေပြု နေရသေးပေရာ မြန်မာ့ ပြုပြင် ပြောင်းလဲရေးသည် ခေါင်းဆောင်များ အပေါ်တွင်သာ မူတည်နေ ရဦးမည်။ သက်တမ်းရ လာသည် နှင့်အမျှ Institutions များ ပုံပေါ်လာသည့် အချိန်တွင်မူ မည်သူတက်တက် ထို Institutions များအတိုင်း လိုက်ပါ လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် နိုင်ငံကို ရှေ့သို့ တွန်းနိုင်မည်။ ထို့ကြောင့် ခေါင်းဆောင်သုံးဦး တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ဆက်ဆံရေး၊ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရေးသည် Institutions များ ပုံပေါ်လာရေး၊ ထိုမှတစ်ဆင့် အနာဂတ် နိုင်ငံတော်တို့အတွက်များစွာ အဓိကကျသည်။
သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးရွှေမန်း၊ NLD ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ သုံးဦးလုံးသည် သူတို့၏ ဆိုင်ရာ ဆိုင်ရာ အရေးကြီး အခန်းကဏ္ဍ များကို ပါဝင်ထမ်းဆောင်ခြင်းဖြင့် ပြုပြင် ပြောင်းလဲရေးတွင် ရှေ့ဆုံးမှ ပါဝင်နေကြသူများ ဖြစ်သည် (Role Play)။ ယင်းတို့၏ တာဝန်များသည် စနစ်သစ်၏ သဘောအရ အချို့ နေရာများတွင် အပြိုင်အဆိုင် (Competitive) ဖြစ်သကဲ့သို့ မြင်ရသော် လည်း အမှန်တကယ်တွင် စနစ် အောင်မြင်စွာ လည်ပတ်စေရန် အပြန်အလှန် အားဖြည့် ကူညီရေး (Competitive) ပင်ဖြစ်သည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ဦးသိန်းစိန်တို့ ပထမဦးဆုံး အကြိမ် တွေ့ဆုံ အပြီးတွင် ပြည်တွင်း ရင်ကြားစေ့ရေး အခန်းသစ် ဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ ကာ ပြုပြင် ပြောင်းလဲရေးများ ပို အရှိန်မြန်လာသလို နိုင်ငံတကာ ပံ့ပိုးမှုများ ရောက်ရှိ လာခဲ့သည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရွေးကောက်ပွဲဝင် နိုင်ခဲ့ခြင်း၊ ၀င်ခဲ့ခြင်း၊ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဖြစ်လာခြင်းတို့မှာ ယင်းတို့နှစ်ဦး တွေ့ဆုံခြင်းမှ အစပျိုးခဲ့ပြီး တစ်ဦးနှင့် တစ်ဦး အပြန်အလှန် လေးစားမှု ပြသခဲ့သည်။ ကျရာ တာဝန်တို့ကို ထမ်းဆောင်ရာတွင် အပြန်အလှန် ထိန်းညှိကြသည့် အုပ်ချုပ်ရေး မဏ္ဍိုင် အစိုးရနှင့် ဥပဒေပြုရေး မဏ္ဍိုင်တို့ကို ကိုယ်စားပြုထားသည့် လွှတ်တော်တို့အကြား ပွတ်တိုက်မှု ရှိမည်မှာ ဓမ္မတာ ဖြစ်သော်လည်း ဓမ္မတာကို ကျော်လွန် မသွားစေရန် မဏ္ဍိုင်နှစ်ရပ် ကိုယ်စားပြု သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန်နှင့် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးရွှေမန်းတို့ကို ယခင် အစိုးရ လက်ထက်က လက်တွဲ လုပ်ကိုင်ခဲ့သည့် ဆက်ဆံရေးက အကူအညီ ပေးသည်။
နိုင်ငံအသွင် ကူးပြောင်းရေးကို ဦးဆောင် နေသည့် ယင်းတို့ သုံးဦး ကိုယ်တိုင်သည်လည်း အသွင် ကူးပြောင်းရေး ကာလကို ဖြတ်ကျော် နေရ သည်။ ဦးသိန်းစိန်သည် ယခင် အစိုးရ လက်ထက်က ၀န်ကြီးချုပ်ဖြစ် ခဲ့ပြီး ဆုံးဖြတ်ချက်များကို အကောင်အထည် ဖော်သည့် နေရာ (Manager) မှ တာဝန် ယူခဲ့သော်လည်း ယခုအချိန်တွင် သမ္မတ အဖြစ် ပန်းတိုင် အပါအ၀င် အဓိက ဆုံးဖြတ်ချက်များကို ချမှတ်သလို အကောင်အထည် ဖော်သည့်နေရာ (Leader + Manager) ကို ယူနေရသည်။
ဦးရွှေမန်း သည် ယခင် အစိုးရ လက်ထက်က အုပ်ချုပ်ရေးတွင် ထိပ်တန်း နေရာမှ ပါခဲ့ပြီး ယခုအချိန်တွင် အုပ်ချုပ်ရေး မဏ္ဍိုင်ကို ထိန်းညှိမည့် ဥပဒေပြု ရေး မဏ္ဍိုင်ကို ဦးဆောင်နေရသည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ယခင်က မူဝါဒ ချမှတ်ရေး ဖြစ်စဉ်တွင် မပါခဲ့သော်လည်း ယခုအချိန် တွင် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် အဖြစ်လည်းကောင်း၊ လွှတ်တော်တွင်း ဒုတိယ အင်အား အကြီးဆုံး ပါတီ၏ ခေါင်းဆောင်အဖြစ် လည်းကောင်း မူဝါဒ ချမှတ်ရေး ဖြစ်စဉ်တွင် ပါဝင် ပတ်သက်နေသည်။
စနစ်သစ် တည်ဆောက်စ အရေးကြီး ကာလတွင် ထိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီး သုံးဦး၏ အခန်းကဏ္ဍမှာ ယင်းတို့အကြား ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက် ခြင်း၊ အပြန်အလှန် ထိန်းညှိခြင်းဖြင့် ယင်းတို့သုံးဦး မျက်နှာလွှဲ သွားချိန်၊ အနားယူသွားချိန်တွင် ဆက်လက် တည်ရှိနေမည့် ကြာရှည်ခံ နိုင်ငံတော်သစ် တည်ဆောက်ရေး၊ ဒီမိုကရေစီ ယဉ်ကျေးမှု တည်ဆောက်ရေး၊ နောင်လာနောက်သားများအား အစဉ်အလာ ကောင်းများ အမွေပေးခဲ့ရေးတို့ ဖြစ်သည်။
The Voice မှ ကူးယူဖေါ်ပြ။
စည်သွတ်စက်ရုံမှ ထွက်ရှိတဲ့ ရေဆိုးတွေကြောင့် ပတ်ဝန်းကျင် ညစ်ညမ်းနေ
11:38 AM သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် No comments
မိတ္ထီလာစက်မှုဇုန်မှာရှိတဲ့ စည်သွတ်စက်ရုံတစ်ရုံတွင် ထွက်ရှိတဲ့ ရေဆိုးတွေကို လူနေရပ်ကွက်အတွင်းမှာပဲ စီးဆင်းမှု မရှိတဲ့ မြောင်းကြီး (အကျယ် ၇ ပေခန့်) တူးပြီး ကန့်သတ်မဲ့ စွန့်ပစ်ထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။
အဆိုပါ ရေဆိုးမြောင်းကြောင့် ပတ်ဝန်းကျင်မှာ နေထိုင်ကြတဲ့ ပြည်သူအများ (အခြေခံပညာကျောင်း တစ်ကျောင်း အပါအဝင်) မှာ ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါး ဆင်းရဲခြင်းဒဏ်ကို ခံနေရတယ်လို့ မြို့ခံတွေက Myanmar News Now ကို ပြောပါတယ်။
မိုးခပ်သည်းသည်းရွာလိုက်ပြီဆိုရင် နဂိုကမြေနိမ့်လို့ ရေဝင်တဲ့အိမ်တွေမှာ ရွံရှာစရာကောင်းတဲ့အပြင် ကျန်းမာရေးကို ကောင်းကောင်းကြီး ဒုက္ခပေးမည် ရေဆိုးများ ကျဆင်းမသွားမချင်း စိတ်ဆင်းရဲခြင်းကြီးစွာနဲ့ နေနေရကြောင်း ရေဆိုးမြောင်းဘေးမှာ နေထိုင်သူတဦးကလည်း ပြောပါသည်။
အရှည် ၃ - ဖာလုံလောက်နဲ့ အကျယ် ၇ ပေလောက်ရှိတဲ့ မြောင်းထဲက ဒီရေဆိုးတွေဟာ စီးဆင်းသွားခြင်း မဟုတ်ပဲ နေရာမှာတင် အောင်းနေတာဖြစ်တဲ့အတွက် ဒီရေဆိုးပမာဏဟာ ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့ အများပြည်သူသုံးစွဲနေတဲ့ မြေအောက်ရေအပေါ် ဘယ်လောက်အတိုင်းအတာထိ ဆိုးကျိုးသက်ရောက်နေပြီလဲ၊ ဘယ်လောက်အတိုင်းအတာထိ ဆက်ပြီးဆိုးကျိုးတွေပေးနိုင်သေးလဲ ဆိုတာတွေအပေါ် လူ လူချင်း စာနာထောက်ထားသောအားဖြင့် လေ့လာသုံးသပ်ပြီး ကောင်းမွန်သော နည်းလမ်းများဖြင့် အများပြည်သူ ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါး ဆင်းရဲခြင်းမှ လွတ်ကင်းရအောင် ဆောင်ရွက်နိုင်သူ၊ ဆောင်ရွက်ပိုင်ခွင့်ရှိသူ မည်သူမဆို အမြန်ဆုံးဆောင်ရွက်ပေးကြပါရန် မေတ္တာရပ်ခံကြောင်း မြို့ခံများက Myanmar News Now ကို ပြောပါတယ်။
Myanmar News Now မှ ကူးယူဖေါ်ပြ။
ရန်ကုန်မြို့တွင်းရှိ သဘာဝဓာတ်ငွေ့ အရောင်းဆိုင်တစ်ဆိုင်အား တွေ့မြင်ရစဉ်
မြန်မာနိုင်ငံတွင် သဘာဝ ဓာတ်ငွေ့အရောင်းဆိုင် ဖွင့်လှစ်မှု အနေဖြင့် ၄၅ ဆိုင် ဖွင့်လှစ်ထားပြီး ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် တွင် ပြည်ပသို့တင်ပို့မည့် ရွှေသဘာဝ ဓာတ်ငွေ့စီမံကိန်းမှ သဘာဝဓာတ်ငွေ့များ ရရှိပါက ရန်ကုန်မြို့မှ သဘာဝဓာတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်း သွယ်တန်းရာ လမ်းတစ်လျှောက်တွင် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ အရောင်းဆိုင်များ ဖွင့်လှစ်သွားနိုင်မည် ဖြစ်ကြောင်း စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောပြပါသည်။
ရိုက်မိ ရိုက်ရာ ဓါတ်ပုံများ
12:37 PM ဓါတ်ပုံ No comments
မောင်းမကန်ကမ်းခြေ ဓါတ်ပုံများ (၂)
3:40 PM ဓါတ်ပုံ No comments
မဂ္ဂါဝပ်နှင့် လူရှစ်ထောင်ကျော်တို့၏ အနာဂတ်
12:26 PM သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် No comments
သတင်း ဆောင်းပါး - မင်းထက်စံ
မြို့တော် သက်တမ်း ခြောက်နှစ်ကျော် လာပြီဖြစ်သော နေပြည်တော်၏ အရှေ့ဘက် မိုင် ၃၇ မိုင်ခန့် (၆၀ ကီလိုမီတာ) အကွာတွင် ‘လျှပ်စစ်စွမ်းအားဖြင့် ခေတ်မီဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်သော နိုင်ငံတော်သစ်ဆီသို့’ ဟူသော အပြာရောင် စာတမ်းကြီးကို ထင်ရှားစွာ တွေ့မြင်ရမည် ဖြစ်သည်။ ကွန်ကရစ် ကျောက်နံရံကြီးများကိုလည်း အခိုင်အမာ တည်ဆောက်ထားသည်။
11:31 AM အခြားသတင်းများ No comments
အောက်ခြေမှာ ခြစားတာ မရှိတော့ဘူး
2:33 PM ကာတွန်း No comments
တနင်္သာရီတိုင်း၊ ထားဝယ်ခရိုင်၊ သရက်ချောင်းမြို့တွင် တည်ရှိသော ရှင်တောင့်ပုံ ဘုရားဖြစ်ပါတယ်။ ရှင်ကိုးရှင် သမိုင်းဝင် ဘုရားထဲက တခု အပါအဝင်ဖြစ်ပါ...
ဒီပန်းချီကားများကို ပဒုမ္မာ သူငယ်ချင်းတွေဆီကနေပြီး ကူးယူတင်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
မြို့ပြစီမံကိန်းတွေကို အကောင်အထည် ဖော်ရာမှာဖြစ်ဖြစ် အထူးစီးပွားရေးဇုန်တွေကို အကောင်အထည် ဖော်ရာမှာဖြစ်ဖြစ် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ မြို့ပြစိမ်းလန်...
သွားမပါလည်း ကားပါရင်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ မမများ
၁။ ဖော်ကောင် နေရာ ... စိတ္တဇဆေးရုံ ဆေးရုံအုပ်.... "မနက်ဖြန်က အရေးကြီးတဲ့နေ့ တစ်နေ့နော်။ ဘာလို့လဲ သိလား? နိုင်ငံတော် အကြီးအကဲ လာစစ်ဆေးလိ...
တမ်းတမ်းတတ လွမ်းနေရခိုက်တိုင်းမှာတောင် လှိုက်မောရှိုက်ဖို......နင့်...ကို ချစ်နေသေးရဲ့... ညသန်းခေါင်ကြီးကလည်း...အူကြောင်ကြောင်နဲ့ ကိုယ့်ဘေးန...
မီဒီယာ ၀ဘ်ဆိုက်များ ခေတ်ပြိုင်သတင်းဌာန ဧရာဝတီ အင်တာနက်မဂ္ဂဇင်း ရိုးမ ၃ သတင်းဌာန မဇ္ဈိမ သတင်းဌာန ဟစ်တိုင် သတင်းဌာန --------------------...
တခြမ်းစိမ်း တခြမ်းဝါ တခြမ်းပူ တခြမ်းအေး ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက် ၄၉၈၁ ပေမှာ သင်ခံစားနေရတာတွေ အံ့သြမသွားလိုက်ပါနဲ့ဦး..... ဒီမှာ စကားဝါပန်းတေ...
၄၈ ကြိမ်မြောက်7July နေ့ အမှတ်တရ ကျောင်းသားဆိုတာ အနာဂတ်ကိုဖန်တီးသူ ဖြစ်တယ်။ ကျောင်းသားဆိုတာ နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာနိုင်သလို၊ စစ်ဗို...
လေးဖြူရဲ့ စာမျက်နှာ ၁၅
စုပေါင်း စပ်ပေါင်း (6)
သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် (14)
အဓိကဖေါ်ပြလိုသော အရာများ (2)
ချောင်းထဲသို့အရောက် အမှိုက်စွန့်ပစ်နေရတဲ့ တာမွေသူမျ...
Copyright © ပေါက်ကရလေး